Izimbali emaqaqasini indlu - umniningwane obalulekile wenduduzo
Ukuphila edolobheni, yebo, ewusizo, kodwa umsindo omkhulu ovela ngemuva njalo zamatshe "izikhwama" ziphakathi kwezakhiwo eziningi, izibani agqoke, imishini esilimaza kwemizwelo futhi sizizwa kanjani. Ngakho-ke, abantu ngawo wonke amathuba ilwele ukushintsha isimo esijabulisayo xaxa, khulula, hamba uye olwandle noma nje isimo. Nokho, uma ungenawo ngosuku olulodwa baphonse izinto futhi uhambe edolobheni, uzizwa kangcono kungasiza houseplants. Imibala emaqaqasini indlu ukusiza ngendlela ehlukile ukubheka ukuthi kwenzekani eceleni futhi alethe ekhaya lakho imfudumalo nenduduzo. Futhi lokho izitshalo ndlela bazizwa engcono ekhaya, izofunda lesi sihloko.
izitshalo ezinkulu zasendlini
Ukusabalalisa noma ukhipha eluhlaza bheka langa amakamelo ezinkulu. Ziyakwazi nenzuzo yokufihla prevnosya endlini isibhakabhaka, ihholo, ihhovisi indawo umuzwa ojabulisayo inkululeko. Iningi afanelekile izitshalo injongo namahlamvu ezibanzi (izinhlobo ezahlukene wamasundu Monstera, izitshalo zenjoloba kanye nezinye). Kodwa uma izitshalo ezibekwe ukuze zibukeke ukukhulisa ophahleni ke indawo engcono kukhona lemon, Shefleru, hibiscus, okungukuthi isitshalo ubude. Ikakhulukazi kwazise abaningi babo eziqhakaza izimo Igumbi kakhulu onyakeni kanye nephunga elimnandi. Kodwa ngamagumbi encane noma entendeni, isibonelo, dratsenu kangcono ungakhethi - bayokwenzela i isikhala esincane kakade ngisho kancane, hambisa iba kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu, kodwa ukuba aphile - ungakhululekile. Kodwa lokhu akusho ukuthi imibala e emaqaqasini encane flat endaweni kufanele lingekho. Ukuze amakamelo okunjalo iqembu ayo izitshalo, okuzoxoxwa kamuva.
Curly ezimbizeni izitshalo - ubuncane isikhala, linanikhulu lema-ubuhle
Akubalulekile ukuba aphathe zonke izinhlobo bindweed wasebenzisa ukuhlobisa indlu kanye nezindawo ezizungezile, nge phansi. Eqinisweni, yiyo kanye ivumela ukugibela izitshalo ukuhlobisa ikamelo ngangokunokwenzeka, cishe ngaphandle kokuchitha isikhala yakhe ephilayo. Bona, ngokungafani kuya entendeni ezinkulu jikelele zingafakwa emashalofini, okuvumela amahlumela ezilengayo ngokukhululekile, futhi emphemeni, lapho ukubiya kahle opletut, futhi phambi endlini ukuze bindweed kwakhiwa izindonga oluhlaza yendlu. Njengoba ubona, izitshalo ukucaca ikhonze njengomPristi i umhlobiso omuhle, ngaphandle ukuthatha isikhala okuningi. Uma unquma ngaleso design yendlu ukunikeza ntandokazi kuleli qembu, wena kuyoba inala ongakhetha kuzo.
Futhi ungakhohlwa ukuthi izimbali emaqaqasini indlu kumele ibekwe lapho kukhona zonke izimo ukuze ikhule. Isundu, utshalwe endaweni ezimnyama futhi inyinyekile, ayengeke akwazi ukuba ikhule futhi enhle njengoMfula isitshalo kubhasikidi iyoba izizathu esibi isiZulu ngomusa ngaphandle ukwesekwa. Hhayi buzo babe hlobo of izimbali emaqaqasini indlu usebenzisa yesondlo ilungile futhi njalo adingekayo isitshalo ngasinye. Uma uya ukuhlobisa ikhaya lakho ne ekutshaleni oluhlaza, ukuthola kusengaphambili uma uzokwazi abenzele izimo ukukhula izimbali. Futhi eziphendula ukukhathazeka Bayokujabulela kuwe ubuhle bayo, flavour kanye ukudala isimo esihle ngasiphi isikhathi sonyaka.
Amathiphu ambalwa ngalokho imibala Litlhoge Nweba Ceiling
C kanjani ukuqala umklamo for girls zezingane?
Ukwakha igumbi kwengane izingane ezimbili
Okulala Interiors e isitayela Provence - charm French
Iyini iHatha Yoga?
Turkish Kangal (Ihluzo): incazelo zohlobo, nemvelo isithombe
Umuthi 'Akvalor "ekhaleni. Indlela yokufaka isicelo "Akvalor" ngoba acinene lavage